Baarlamaanka Puntland oo ansixiyay gudiga doorashada puntland - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Baarlamaanka Puntland oo ansixiyay gudiga doorashada puntland
Baarlamaanka Puntland oo ansixiyay gudiga doorashada puntland
November 16, 2019 Duceysane245
Xildhibaanada Baarlamaanka maamulka Puntland ayaa maanta kulankoodii u horeeyay ku yeeshay xaruntooda Garowe tan iyo markii ay soo doorteen Khamiistii Guddoomiye Baarlamaan cusub oo ay ku bedeleen midkii ay Mooshinka ku rideen.
Kulanka maanta waxaa shir Gudoominayay guddoomiyaha cusub ee Baarlamanka Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, iyadoo ay soo xaaadireen inta badan Xildhibaanada Puntland.
Baarlamaanka Puntland ayaa cod aqlabiyad leh waxa ay ku ansixiyeen Guddiga cusub ee doorashooyinka Puntland (TPEC), kuwaasoo ay horyaalaan shaqooyin culus, iyadoo xubnaha Guddiga ay marka hore warbxin ka siiyeen Xildhibaanada shaqada u qabsoontay tan iyo markii la soo dhisay.
Si kastaba, Guddiga doorashooyinka Puntland waxaa horyaalla shaqooyin ay kamid yihiin; diiwaan-gelinta urur-siyaasadeedyada, diiwaan-gelinta cod-bixiyaasha, xuduudaynta degmooyinka Puntland iyo qabashada doorashooyinka golayaasha deegaanka.
Madaxwayne Farmaajo iyo Xeer ilaaliyaha Qatar oo maalin kahor kulan qarsoodi ah ku yeeshay Nairobi
C/raxmaan C/Shakuur oo ka hadlay sababta xisbiga Wadajir uusan uga mid noqon Madasha xisbiyada Qaran
Qaramada Midoobay oo ka digtay dib dhac ku yimaada Doorashada
Habka ugu wanaagsan ee lagu yarayn karo walwalka Imtixaanadka.